KDE 4.7 Waxaa laga heli karaa Tijaabada Debian | Laga soo bilaabo Linux
KDE 4.7 Waxaa laga heli karaa Imtixaanka Debian
patriziosantoyo | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux
Ka waran asxaabta <° Linux Kani waa qoraalkaygii ugu horreeyay, maxaa kafiican oo loo sameeyo marka loo eego inaan kuu keeno warka wanaagsan ee jiritaanka KDE 4.7.4 keydka Tijaabada Debian.
Waxay ila tahay muhiim aniga inaan u sheego tan, maaddaama mawduuca dhowaan lagu taabtay daabacaadda Gara, halkaas oo dad badani ku xuseen sida wakhtigeedu u dhacay KDE en Debian, iyadoo la tixgelinayo noocaas 4.8 horey u jiray.
Waxay ahayd si hufan markii aan arkay ogeysiis ii ogeysiinaya jiritaanka 34 cusboonaysiin aan ogaaday, oo aan libiqsanayn ayaan isla markiiba cusbooneysiiyay.
$ sudo karti u leh aamin-hagaajinta
Kadib wax waliba diyaar ayey u yihiin inay adeegsadaan, markaa dhammaan intii rabtay, waa waqtigii cusbooneysiinta.
Waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahinta ku saabsan noocaan ah KDE xiriiriyeyaasha soo socda:
Nooca ugu dambeeyay ee KDE waa la heli karaa: KDE 4.7.2
Wadada aada KDE 4.7.3 durba waa bilaabatay
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » KDE 4.7 Waxaa laga heli karaa Imtixaanka Debian
47 faallooyin, ka tag taada
Waxaan ku riday CodeNinja si markaa kuwa maskaxda ka baxsan ee KDE ee UCI u helaan baytariyada.
Waan ka xumahay laakiin ... Waa maxay CodeNinja?
Bog horumarineed oo ku yaal Jaamacadda cilmiga Informatics ee Cuba 😀
Beel kamid ah barnaamijyada Python halkan 😀
Maxay fiicantahay waxashnimada. Waan jeclahay sida kani u dhawaaqayo "Jaamacadda Cilmiga Kombuyuutarka ee Cuba": $ Waxaan u sheegi doonaa chavez inuu ii diro Cuba si aan halkaas wax uga barto \_ O / \_ O /
Laga soo bilaabo keydka KR48 ee OpenSUSE waa casriyeyntii afaraad ee aan ka helo KDE 4.8.1. in baakadaha ku jira Debian aysan ahmiyad aad u weyn siinin deegaanka ... inay i saxaan haddii aan qalad ku jiro, muddo dheer kuma isticmaalin Debian.
Dhab ahaan Hadafka Debian lama mid aha qeybinnada kale ee ay ku dadaalayaan inay qurxiyaan desktop-ka.
Mid ka mid ah maalmahan waxaan isku dayi doonaa KDE on debian.
Soo dhowoow saaxiib 😀
Waxaan u maleynayaa hadda in dheelitirku u janjeersaday Debian ... dhowr bilood ka hor, Courage, elav, aniga iyo kuwa kaleba waxaan adeegsanay ArchLinux, laakiin hadda elav, aniga, adigu hadda soo gala, waxaan isticmaalnaa Debian (iyo Courage waxay kuu adeegsaneysaa-ogow), waxaan qabaa in Debian ay hadda ku soo duushay goobta HAHAHA.
Waxba, waqtiga fiican ee boostada, waad ku mahadsantahay inaad na siisay caawimaaddaada iyo sifiican ... waxaad arki doontaa sida wanaagsan ee ay u dareemeyso qorista, in la aqriyo, looga jawaabo, la waydiiyo, iwm.
Ahem, waan ka xumahay laakiin waxaan isticmaalayaa liin-gooska Linux, marka UC FUCK OFF! xD
Sidaas oo kale aniga iyo saaxiibkay, waa ku faanayaa Linux Mint xD
INA VIVA DEBIAN «NIDAAMKA HAWLGALKA UNIVERSAL» iyo saddexda laamood ee waaweyn:
- Xasilloon (loogu talagalay server-yada)
- Tijaabinta (kuwa aan sida degdegga ah ugu jirin inay helaan waxa ugu dambeeya oo ay rabaan xasillooni)
- Sid (dhagaystayaasha jecel inay haystaan ​​waxyaabaha ugu dambeeya oo ay dareemaan inay tahay sii deyn)
😀 😀 .. Maxaad u maleysay darajadan? Fikradda 😉
laanta kuwa aan ku degdegin inay helaan waxa ugu dambeeya waa xasiloonida. Laanta imtixaanku waa “dheelitirka” aan dhammaystirnayn ee u dhexeeya xasilloonida iyo tan cusub.
waa in xasiloonida waligeed dhaqaaqin, halkaas baakadaha ayaa la qaboojiyey. laakiin waxaa jira isticmaaleyaal firfircoon oo sida wax soo baxayaan jeclaan lahaa inay tijaabiyaan .. waayo waa laanta imtixaanka.
su'aashaydu waxay tahay: sidee loogu talin karaa isticmaalka laanta Sid? maaddaama ubuntu ka samaysan tahay iyada oo waliba baakado ka soo qaadda kii tijaabada ahaa. Immisa kalsooni ayaa lagu qabaa
Ka yar lagu taliyay ka badan imtixaanka. Waxaa loogu talagalay debian "wax ku biiriyaasha", ama barnaamijyada soo koraya ama soo gudbinta cilladaha.
Waxaan dhihi lahaa waa ikhtiyaar aad ufiican, waxaan la joogay dhowr bilood wax dhib ahna kalama kulmin.
Ku jawaab Christopher
Christopher .. miyaad isticmaaleysaa laanta Sid? Noo sheeg sida aad tahay, ma isticmaashaa KDE ama Gnome Shell? Immisa jeer ayaa nidaamka la cusbooneysiiyaa? Noocee ah kernel, libreoffice iyo vlc ayaad haysaa?
Waa taas in laanta 'Stable' loogu talagalay server-yada, ama dadka aan xiiseyneynin noocyada ugu dambeeyay (cusub) ee barnaamijyada, laakiin dhab ahaantii waxay leeyihiin 100% nabadgelyo ah in wax walba ay si fiican u shaqeyn doonaan.
Ma waxaad rabtaa inaan kuu soo diro sawirka kumbuyuutarka oo qaladka diskiga adag ku jiro si aan u arko haddii habkaas aad u joojineyso fucking?
Tan waxaan ula jeeday kaftanka qoraalada
Ah kaalay saaxiibkay, kaftan fudud oo aan dhib lahayn 🙂
Marka hore waxaan ugu hambalyeynayaa qoraaga jagada. Si la yaab leh, habka qorista iyo u soo dhowaanshaha nuxurka waxay ku habboon tahay qaabka balooggeena ^^
Marwalba waan isticmaali jiray Debian U_U. Arch Waxaan kaliya isku dayay dhawr maalmood, markaa ha igu tirin inaad tahay isticmaale Arch 😛
Waxaan nahay labo…
Waxaan nahay labo… Oh, iyo hambalyo patriziosantoyo ('short nick xD) iyo Ku soo dhowow kooxda 🙂
PS: Wanaagsan in laga ogaado KDE, hada waxaan ognahay in Gaara uu seexan karo nabad LOL
Mahadsanid, waa inaan helaa naaneys xD
Waad ku mahadsantahay, sidaan sheegayay waxaan rajeynayaa inaan awoodo inaan lashaqeeyo <° Linux, sidaasna awoodi karo inaan waxyar dib ugusoo celiyo inta ay iga caawisay.
Ku jawaab patriziosantoyo
wanaagsan 😀 😀 .. jidka agtiisa 4.7 intee goor buu soo baxay ??
KDE 4.7.0 waxaa la sii daayay bishii Luulyo 2011 - » http://kde.org/info/4.7.0.php
Iyo KDE 4.7.4 (oo ah kan imika Imtixaanka galaya) ayaa soo baxay Diisambar 2011 - » http://www.kde.org/info/4.7.4.php
Hagaag waxay ahayd 3 bilood .. Waxaan rajaynayaa inay uqalmeen 😉
Ahahahah cafiska waxaan ku soconeynaa 4.6.5 xD
Caadi, haddii aanan ku qaldamin Pardus waxay sameeyeen ugu badnaan 2 sanadle ah oo la sii daayo ka dibna si ficil ahaan u qaboojiyey qaybta keydka kde.
WTF !!! O_o
Anigu waxaan ahay isticmaale gnome ah dhammaan waxyaabaha aan u adeegsado, iyo qaar xfce ah, laakiin waxaan ka fikirayaa isku dayga kde, weli ma aqaano haddii qaanso, chakra, ama wax kale.
Ka jawaab sheekooyinka
ugu dambeyntii. Waxaan u maleynayay inaysan waligeed dhici doonin XD. waa waxa kaliya ee aan ku eedeyn karo debian X- (
Ufff KDE wuxuu igu dhuftay cusbooneysiinta ... KDM waxaa loo bedelay mid aad u fool xun markaan isku dayo inaan galo KDM wuxuu mar kale ku soo baxayaa wareeg aan dhammaad lahayn 🙁
Nasiib wanaag waxaan u hayaa oo kaliya baaritaanka ...
Taasi iguma dhicin aniga ... Waxaan ula jeedaa, nidaamku wuu burburay laakiin kaliya maxaa yeelay si xun ayaan u cusbooneysiiyey, markii aan soo dejiyey dhammaan xirmooyinka aan u baahnaa, waxaan cusbooneysiiyay dhibaato la'aan. Isku day inaad sameysato isticmaale cusub adoo isticmaalaya terminal ([Ctrl] + [Alt] + [F3]) oo aad la gasho isticmaalehaas adoo adeegsanaya KDM, si aad u aragto haddii isla wax kugu dhacayaan.
Miyaan ku rakibi karaa desktop-ka LMDE dhibaato la'aan? Waxaan ka akhriyay goleyaasha kale inay dhibaato u keenayso maktabadda.
maxaa run ah
Waxaan xasuustaa akhrinta ka soo horjeedka, wax taas ku saabsan wax dhib ah ma jirin. Laakiin maadaama aad xustay, waxaan u maleynayaa inay fikrad fiican tahay maalmahan mid ka mid ah in la isku dayo LMDE oo la rakibo KDE.
Weligay iskuma dayin, laakiin aragti ahaan waa inuusan dhicin.
duunyo 127 dijo
Imtixaanka Debian, laakiin ma dhahaan waa deggan yahay? mid ka mid ah sababaha aanan u dhammeynin go'aankeyga ku aaddan adeegsiga dardaarankan ayaa ah maxaa yeelay waxaan u arkaa inay tahay waqtigii la soo dhaafay in loo isticmaalo desktop, sida kde, firefox ... aniga ima qanciso
KZKG ^ Gaara ayaa rakibay ilaa iyo hadana wax dhibaato ah kalama kulmin ^^
Waxaan rakibay shalay, waxay u shaqaysaa si aad u wanaagsan oo dhakhso badan, iyada oo 8 tab la furay iyo 4 codsi oo ay isticmaalayso 850 MB. Waxaan u malaynayaa inay tahay adeegsi macquul ah marka la fiiriyo in processor-kaygu yahay AMD64.
laanta imtixaanku waxay qaadataa wakhti in lagu daro waxyaalaha ugu dambeeyay .. waa wax iska caadi ah debian, haddii aad rabto maaddadii ugu dambeysay ama aad isticmaasho sii deynta istcimaala ama isticmaal fedora oo waliba noqon karta ikhtiyaar wanaagsan 🙂
Yaa raba wax, wax ayaa isaga ku kaca 🙁
Dacwadaydu waa mid xiiso leh, waxaan hayaa mashiin leh Tijaabinta iyo mid kale oo leh Sid. Sid ma ihi wax dhibaato ah markii la cusboonaysiiyay KDE 4.7 qiyaastii todobaadyo ka hor, Tijaabaduna meel walba way igu dhacday.
Sikastaba, sheekooyinka ha seexan 😉
Orod aad u yaab badan 😛 .. Waxaan ula jeedaa laanta sidu sifiican ayey u dhaqmeysaa markaa 😉 .. adiga ayaa kula socda adiga waxaad tahay qofka labaad ee leh laanta Sid Wuxuu u dhaqmayaa si la yaab leh wax dhib ahna ma uusan siinin.
Waa inay leedahay isku xirnaansho, ubuntu wuxuu ka yimaadaa Sid of debian kuma fashilmo nidaam ahaan, cidda ku fashilantay waa xirmooyinka iyo (waxay kuxirantahay xirmada).
Distros oo sii daaya sii daaya oo waxyaabaha ka soo baxa foornada ma fashilmaan. Marka sidee ugu sharraxeysaa in dadka reer debiya ay yiraahdaan laanta Sid guuldarro ?? Ma fahmin, maxaa yeelay kuma guuldareysto KISS laakiin debian haa?
Adigu gacanta ku badal booska badhanka Xfwm
Gajim oo ah macmiil macaamil badan